Indlela yokuba yiCCNP engaqinisekisiweyo kwiComputer Certified Professional - ITS Tech School
Isikhokelo seNyathelo ngeNyathelo ukuze ube yiCCNP yeN Wireless Certified Professional
I-CCNP engaqinisekisiweyo yeeNgcaciso
Yintoni i-certified CCNP engenazintambo?
Inyathelo 1: Khangela kwithuba elifanelekileyo lokuba ufanelekile ukuthatha isatifikethi
Isinyathelo 2: Ukufumana isatifikethi
Inyathelo 3: Ukuvuselela isatifikethi
I-Cisco inikezela ubungqina obuninzi bezakhono zobungcali CCNA kwaye CCNP. Ekubeni CCNP yinqanaba eliphakamileyo kunalo CCNA, kunzima kakhulu kwaye icela ulwazi olugqithiseleyo kunye nokusebenza. Ukuba kukho imvelaphi yesatifiketi esingenantambo, imigangatho yokunxibelelana nge-wireless kunye ne-hypothesis isetyenziselwa ukuvelisa ukusungulwa kwabaqeqeshi ukuhlangabezana nezidingo zonxibelelwano ezingenazintambo. Ngokufunda kuyanda nge-certification, abaqeqeshi bangakwazi ukwenza intsingiselo yeemfuno zezoshishino kwi-installation efakekileyo. Sinike kaloku ithuba lokubona isatifikethi se-CCNP esingenasiphelo.
Isatifikethi se-Wireless Certified Network seCisco Certified Network sijolise kwiinkqubo zokunxibelelana ngeenethiwekhi ezingenazintambo usebenzisa izinto zeCisco. Wayejwayelene ne-2009 kunye nokuqwalasela iimfuno zebhizinisi elikhulayo. Ingxelo yokukhutshwa kweziqinisekiso zokuthumela, ukucwangcisa, ukugcina nokuphanda amanethiwekhi angenazintambo zeCisco.
CCNP Inqwelomoya isasaza izifundo ezifana nokuqondisa izifundo zendawo, ukufumana iimfuno zomthengi, ukuqhuba amanethiwekhi angenazintambo, ukufumana isiseko se-LAN esingenantambo kunye namanye amanqaku angabonakaliyo karhulumente. Abachwephesha abanesi siqinisekiso baqondwa kwihlabathi jikelele njengokuba bephethe izandla-ngokubandakanyeka kwizinto zobuchwepheshe ezingenazintambo zeCisco. Esi siqinisekiso esiphambili kubaqeqeshi abafuna imisebenzi engcono kunye nomvuzo ophezulu. Ukunikezelwa ngaphantsi kwindlela yokuthatha isatifikethi.
Bona kwakho :CCNA Certification - Isikhokelo esigqibeleleyo
Abaqeqeshi benethiwekhi abangenazintambo abafana nabaxhasi benethiwekhi, abaphathi beenethwekhi kunye neengcali zenethiwekhi bangathatha isatifikethi sokuphucula ingqiqo kunye nokuqonda kwabo. Abantu abajonge ezi zikhundla banokukhetha oku ukuvusa ukuqeqeshwa okubonakalayo ngokufanelekileyo kwimisebenzi ehambelana nomsebenzi. Kuhlolwe ukuba abasebenzi baya kwandisa ngaphezu kwe-20% phakathi kweminyaka eyi-2008 ne-2018. Izinga lokuphuhlisa ishishini lithembeke ukuba libe ngeenxa zonke ze-30 ukwenza kube luncedo kubaqeqeshi kule ndawo. Ixesha elizayo libona ithini lemivulo yomsebenzi oza kubakhokelo emva kokuba bafumana isatifikethi.
Indoda efuna ukuqinisekiswa kufuneka ifumane i-CCNA Wireless okanye i-CCIE isitifiketi. Oku kuthetha ukufumana isatifikethi se-wireless ye-CCNP, kufuneka kuqala athathe i-Wireless Cisco Certified Network Associate Wireless okanye I-Cisco Iqinisekisile umsebenzi we-Intanethi ye-Expert certification nayiphi na indlela.
Kukho iimviwo ezine ze-wireless certification. Ezi yi-642-731 CUWSS, i-642-741 IUWVN, i-642-746 IUWW kunye ne-642-736 IAUWS. Imviwo nganye iqulethe i-50 kwiidilesi ze-60 ekufuneka zigqitywe ngeyure nesiqingatha. Kulo lonke uvavanyo, kukho ikhosi yoqeqesho lweentsuku ze-5. Ezi zifundo zilungiselela umgcini-mandla ukusetha inethiwekhi engenazintambo, zibandakanya izinto ezahlukeneyo njenge-Voice kwi-Wireless Local Area Network administrations, izinzuzo zokuphathekayo kunye nokukhusela umnxibelelwano malunga neengozi ezibonakalayo.
Ngasinye isatifikethi sobugcisa esinikwe ServerAdmin lihlala likhulu ukuya kwimizuzu emithathu nje. Emva kolu xesha, isatifikethi siphela kwaye umninimzi we-testament akaze aphinde aqeqeshe ukufumana izibonelelo ezinobungcali. Kufanele afake isicelo sokuqinisekiswa kwakhona kwakhona ukuze aqhubeke ewaqonda. Unemisebenzi emine yokukhangela. Ufanele adlule nayiphi na i-examination level level ngaphambi kokuba isatifikethi siphele okanye kufuneka sidlule nayiphi na i-CCIE yokuhlolwa. Inxalenye yesithathu kukudlula ilungelo elikhoyo ngoku I-Cisco Certified Design Design (CCDE) iqulunqwe okanye iphantsi kweemviwo zehlabathi. Ukhetho lokugqibela luya kudlula intlanganiso yebhodi kunye neemfuno zophando kwiCisco Certified Architect (CCAr) isatifikethi esimqinisekisa kwakhona zonke izatifikethi zezinga eliphezulu.
CCNP Inqwelomoya isiqinisekiso esikhulu esibonisa ukuba abakhuphisanayo bathathe uvavanyo kufuneka babe nesiseko esikhulu kwintsimi. Oku kuqukwa kokufunda okucwangcisiweyo kunye nokusebenza ngokubhekiselele kwinto yokuba sele iqinisekisiweyo, baya kusebenza kwiimeko zokunxibelelana. Oku kuya kuvivanya naziphi na izakhono zabo ezinezakhono ngokusebenzisa iziqinisekiso.
Bona kwakho :Kutheni iikhampani zifuna abaPhuhli bezoKhuseleko kunye nee-Admins CEH eziqinisekisiweyo?
CCNA Certification - Isikhokelo esigqibeleleyo
Izinto ezibalulekileyo Ukuzi malunga neCCP yokuBambisana neZatifikethi